बोली सम्हाल्न नसकेपछि कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङको मन्त्री पद खोसियो ! - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
प्रकाशित मिति: ८ श्रावण २०७५, मंगलवार July 24, 2018
काठमाडौं । बंगलादेशमा एमबीबीएस अध्ययनरत नेपाली छात्राहरुबारे आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङको मन्त्री पद जाने भएको छ । आफ्नो अभिव्यक्तिले कसैलाई चोट पुगेको भए भन्दै माफी मागेपनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कानुनमन्त्री तामाङलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएको छ । उनले आजै मंगलबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरेर राजीनामा दिएको घोषणा गर्ने स्रोतले जनाएको छ ।
केही दिन अघि मन्त्री तामाङ्गले एक कार्यक्रममा बंगलादेशमा डाक्टरी पढ्न जाने छात्राहरुले सर्टिफिकेटका लागि आफ्नो अस्मिता सुम्पनु पर्ने कुरा आफुले सुनेको बताएका थिए। उनको अभिव्यक्ति गलत भएको र यसले बंगलादेशमा पढेका तथा पढिरहेका छात्राहरुको अस्मितामाथि दावा बोलेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा उनको व्यापक अलोचना भएको थियो।
सोमबार राति प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहितको नेकपाको सचिवालय बैठकमा नेताहरुले उनलाई राजीनामा गराउनु पर्ने मत राखेका थिए। पार्टीमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल निकट मानिने तामाङलाई राजिनामा गराउन नेता नेपाल आफैले चासो राखेको बताइएको छ ।
एक्लाएक्लै एकता वार्ताः प्रधानमन्त्री ओली, प्रचण्डलाई अध्यक्ष!
काठमाडौं । पार्टी एकताको ‘निर्णायक’ छलफलमा रहेका एमाले-माओवादी केन्द्र दुवै पार्टीका अध्यक्ष आ-आफ्नै […]
शक्ति देखाएर बार्गेनिंग गर्दै खुमबहादुर,देउवा अचम्मित, उपसभापतिमा रोक्न निधि सक्रिय
काठमाडौं । १३ औं महाधि नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीलाई आफू खुसी […]